Adeegsiga jQuery si aad u Casiirto Shabakad Caadi ah | Martech Zone
Arbacada, Maarso 18, 2009 Axad, Febraayo 17, 2013 Douglas Karr
jQuery wuxuu sameeyay khiyaamada.
Raadi raadinta jQuery + waxkasta, waxaad sidoo kale ogaan doontaa in horumariyayaashu ay xalliyeen xalal, oo loo yaqaan 'plugins', oo diyaar u ah inay baxaan! Xaaladdan oo kale, waxaan sameeyay raadinta "jQuery carousel" waxaanan helay heer sare, dhammaystiran jQuery xalka carousel on Dynamic Drive.
Wax kale oo fiican oo ku saabsan jQuery waa taas lambarka waxaa hadda martigelinaya Google. Natiija ahaan, uma baahnid inaad jQuery ku soo rogto server-kaaga, sidoo kale akhristayaasha websaydhkaagu maahan inay soo dejiyaan mar kasta. Hadday hal goob la joogeen tixraaca jQuery, si otomaatig ah ayaa loo keydiyaa si loogu isticmaalo goobtaada!
Si fudud ku dar lambarka sumadda madaxaaga oo waad baxaysaa oo waxaad la socotaa jQuery:
Si aan u socodsiiyo carousel, waa inaan soo raro oo tixraaco qoraalka gogosha leh:
Intaa ka dib, wax ka beddelka bogga ayaa fudud! Waxaan geliyay sariirahayga meel ku dhex taal meel la yiraahdo miinleyda iyo xariiqa albaabbada gudahood div loo yaqaan suunka. Ka dib waxaan ku daray qayb yar oo ka mid ah koodhadhka habaynta ee ku dhex jira sumadda jirkayga.
Waad yareyn kartaa ficilka xoogaa yar. Xaaladdan oo kale waxaan wax ka beddelay qoraalka si otomaatig ah loogu socodsiiyo markii bogga la rarto. Waxaan u habeeyay xawaaraha iyo muddada guddi walba la soo bandhigayo, iyo sidoo kale badhannada si ay gacanta ugu wareegaan looxyada bidix iyo midig. Muuqaal kale oo qabow oo ka mid ah qalabkan - markii aad tagto guddiga ugu dambeeya, waa dib u socosho ku noqo kii hore!
Waxaan hadda dib u dhisayaa degelkeyga waxaanan hiigsanayaa inaan bilaabo toddobaadkan dhammaadkiisa haddii wax walboo hagaagaan. Waxaan u adeegsanayaa jQuery dhowr meelood oo ka mid ah mana lihi wax cabasho ah illaa iyo hadda. Wax walba waxay umuuqdaan inay bixinayaan dareenkaas "web 2.0" waxaana rajeyneynaa inay kaliya bogaadin doonto goobta la dhammeeyay.